Registry ကို Backup လုပ်နည်း ~ မျိုးကို
Registry ကို Backup လုပ်နည်း
06:11 Computer, How To, Registry, Technique, Window7No comments
ကွန်ပျူတာ ရဲ့ The Heart of the Computer Registry လို့ တင်စားထားတဲ့ Registry ကို ပြုပြင်တော့မယ်ဆိုရင် Something Wrong ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Windows မတက်ထိ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် Back Up လုပ်ထားသင့်တယ်ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ User တိုင်းသိကြမှာပါ ..။ ဒါကြောင့် Registry က်ို Back Up လုပ်ဖို့ အတွက် များစွာသော Program တွေရှိပေမယ့် Window7ရဲ့ ရှိးရှင်းတဲ့ နည်းလေး နဲ့လည်း လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်..။
1. Window Key + R ကို နှိပ်ပီး regedit လို့ ရိုက်ပီး OK လိုက်ပါ..။
2. အောက်ကလို Box လေးကျလာတဲ့ အခါမှာ File က Export ကိုသွားပါ..။
3.အောက်ပါ ပုံလို ဘယ်နေရာမှာ Save မှာလည်းဆိုတာ ရွေးပီး အမည်ရေးပါ .. ။
4.ဒါဆိုရင်တော့ Back Up လုပ်ထားတဲ့ File လေးကို အောက်က ပုံမျိုးလေးလို ရပါပီ..။
ပြန်ပီးတော့ Restore လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒုတိယ မြောက်ပုံ ရဲ့ Export အပေါ်ကနေပီး Import ကိုနှိပ်ပီး အထက်ကလို File လေးထားခဲ့တဲ့ နေရာကို Browse လုပ်ပေးရုံပါ ...။